Uphengululo lwemovie: Ndicinga ngokuphela kwe-Hua Mulan | Ukudakumba ngaphantsi
Ukuba ayibonisi kuqala kwiNetflix, imuvi entsha kaCharlie Kaufman ethi “Ndicinga ukuphelisa izinto” iya kufana naleyo ikhutshwe kutshanje nguChristopher Nolan ”i-Tenet inomtsalane ophindwe kabini. Oku akwenziwa nje kukugula nokuzisola kwinoveli kaKaufman ethi “Antkind”, umlinganiswa ophambili womgxeki wefilimu uyavuya. Ukuphazamiseka kwingqondo yeefilimu zikaNolan kunye nemisebenzi kaKaufman. Njengo-Tenet, umsebenzi kaKaufman wamva nje ugcwele utshintsho ngexesha, intloko yengqondo yokuzicingela nokuzimela okusesikweni, isikhokela indlela yokuyibukela ngelixa sibukele. Ngokungafaniyo ne-Tenet, yi-surreal, isitshixo esiphantsi esinazandla ezibini, esizama ukusothusa ngaphandle kokuphazamisa iindlebe zethu.
Imovie edlala uJessie Buckley noJese Plemons ngokuqinisekileyo ayenzekanga ngengozi. Ifilimu ijikeleza kwisibini esinobuhlobo obutsha obunokubakho malunga nokuwa ngenxa yokuba uBarkley's Lucy urhoxile kwaye wavuma ukutyelela abazali bakaPlemons Jake. ULucy-ngekhe abizwe ngokuba nguLucy-ngumntu onamathandabuzo malunga nobudlelwane. Ungumculi-mhlawumbi i-physicist okanye imbongi-kunye nentloko yakhe (ebesoloko siyigxotha) Amagqabantshintshi angenakuphikiswa kwaye angatsho ukungazithembi okukhohlakeleyo kodwa okuhle kodwa uJack ngokwakhe, Njengokuba imozulu isiba mandundu, bebesondela kwaye kufutshane nekhaya lakhe lobuntwana.
Nangona iifilimu zikaKaufman zihlala zinendawo ethambileyo yesoyikiso ephazamisayo ekhoyo, xa umlinganiswa ophambili efika kwifama ekhwankqisayo yabazali bakaJack, ndicinga nge "Into Ephelayo" ephucula oku ngokukodwa okanye nangaphezulu. Mbini. Umama noTata bayaphambana (badlalwa nguTony Colette noDavid Tris, bobabini baphambene), kudityaniswa nokuhamba kwexesha ngokukhawuleza nokuphindaphinda okungenamsebenzi, baphinde bamtshintsha uLucy noJack Uthando lwakhe lwakhawuleza lwabhubhisa amandla kaLucy Yahlula phakathi kwenyani nobuxoki.
Iqhubeka njani lento? Kuqala kwavakala ngathi singene kwindawo ethi "Twilight Zone" okanye "The Shining", emva koko yinguqulelo yamaTshayina neNtshona yeAlain Resnais's "Marienbad's Last Year", kunye noLucy - okanye inenekazi uLucy esimaziyo- lafumanisa ngequbuliso ukuba laqala incoko noJack. Abantu abadala nabaneziphene. Ukusebenza kukaBuckley noPlemons kuye kwatshintsha ngendlela echuliweyo, nto leyo esenza ukuba singalingani kakhulu, nangona ifilimu ibonakala ngathi izama ukucinga ngokuzibandakanya kokungazinzi kwengqondo phakathi kwendoda nomfazi, kunye nendlela ubudlelwane phakathi kwabantu obutshintsha ngayo ukuba singobani (okanye Sicinga ukuba ngoobani?) Ikhula ngendlela esenkangala ngakumbi nangakumbi emnyama. Nangona isekwe kwinoveli ngumbhali waseCanada u-Iain Reid ngo-2016, ngumsebenzi kaKaufman kuphela. Ngobuqili, ubuqili bawela kusizi kunye neempambano zesilpsism.
Isigqibo esiphikisayo sikaDisney sokudlula kwithiyetha zemiboniso bhanyabhanya kunye ne-hype yokubuyisela isenzo se-Mulan kwiDisney + (ehlawuliswe ngaphezulu kwentlawulo yenyanga yokubhaliselwa kwenkonzo yokusasaza), ngenxa yokuba iyadika. Ukubaluleka kwezorhwebo ngokupheleleyo. Ukushiya ingoma kunye nelizwi likaEddie Murphy (uEddie Murphy), ngesimbo esinqumayo, into esiyifumanayo iyifilimu enelayisensi yabasetyhini ehambelana nesiqwenga ngokubanzi kunye nokubetha koqobo, kodwa izama ukudlulisa ukuguqula imuvi kaMulan. uqobo kwi "Star Wars" yokulwa amandla kuxhomekeke kuhlobo lwamandla. U-Liu Yifei wadlala indima entle kwintombazana enetalente. Wayezenza ngathi uyinkwenkwe kwaye wadlala indima katata okhubazekileyo emkhosini womlawuli egameni lakhe. Kodwa le Gong Li enkulu ichithwe ligqwirha. Wayenethemba lokumnyanzela ukuba ajoyine umtshato aze awubhukuqe. Uosolusapho bacinezela ubume bamandla abo babini. Ngokwesitayile, umlawuli waseNew Zealand uNiki Caro (umkhweli weminenga) waboleka ngokukhululekileyo kwiifilimu zikaWu Xia, ezithe zatsala umdla wababukeli bamazwe aphesheya emva kwempumelelo ka "Crouching Tiger, Hidden Dragon" (Hucdenden Dragon) Amehlo akhe (ngokubonakalayo nokunika imbeko ku "Hero" , "Indlu yeeNqwelo ezibhabhayo") kunye ne "Isiqalekiso seGolide yeentyatyambo", kodwa isenzo asiqhelekanga njengokucinga: ukujonga kakhulu kwikhamera, kodwa andiqondi ukuba ungazisebenzisa njani ukuqhubela phambili ibali.
Akunakudideka kunye nokulungiswa komculo emnyango owamiswa kwinoveli nguVictor Hugo ngo-1862, idrama yolwaphulo-mthetho yaseFrance eyonyulelwe u-Oscar eLes Misérables ithathelwa indawo ngumbono kaHugo ngokwasentlalweni.Umoya weza wagweba indlela ulwalamano lukaHugo olubagweba ngayo. Yabanjwa yaza yadluliselwa eMontfermeil ngaphandle kweParis kungekudala emva kokuphumelela kweNdebe yeHlabathi ye-2018 yeFrance. Ngokwenza njalo, uLadj Ly, umphathi weqonga lokuqala, wasebenzisa ezi ntsomi zimbi ukufundisisa ubundlobongela bamapolisa kunye nokunyusa imeko yabemi abasuka kwamanye amazwe abaye bavalelwa kwinkqubo yolwaphulo-mthetho kwimbali yonke. Amapolisa yindawo yethu yokuqala yokungena kweli hlabathi, kwaye ifilimu iya kukhutshelwa ngaphandle eRuiz (Damien Bonnard) ngohlobo losuku loqeqesho, olwesebe lolwaphulo-mthetho esitratweni eParis. Nangona kunjalo, ukuba umboniso bhanyabhanya wawukhutshwe okokuqala njengenkqubo engqongqo yamapolisa, uLy wayeqala ukwandisa ubalo lwakhe ngokuvumela indoda yalapha ene-drone ngengozi ukuba ibambe imeko eyandayo phakathi kwamapolisa kunye neqela lolutsha. Kwimifanekiso, umntwana wokugqibela waxhwilwa. Shoot ngompu weFlash-Ball ongabulali. Emva koxinzelelo olwandileyo kunye neengxwabangxwaba, kwavela izinto ezothusayo kwimidlalo yasezidolophini yaseFrance enje ngeLahain kunye neDe Pan, kodwa nakwi "Lord of the Flies", "Lonely Home", "Teenage Boy" Iiklasikhi zempambano "Ngapha komda" Kwaye “INgonyama yeKing, njengoko imikhankaso yokuthengisa enobundlobongela yabantwana icwangciswe ngononophelo, ikwabonakalisile ubume bokutshabalalisa kwale nkqubo. Kule nkqubo, abantu abadala ekufanele ukuba babakhusela baphindaphinda bathengise ikamva labo. ■
"Ndicinga Ngokuphela" iyafumaneka kwiNetflix, "Mulan" iyafumaneka kwiDisney +, kwaye iLes Misérables iboniswa kwezinye iithiyetha
Enkosi ngokufunda eli bali kwiwebhusayithi yethu. Ngelixa nditsala umdla wakho, ndibeka phambili iimfuno ezibalulekileyo kuwe.
Iziganeko eziphambili kwi-2020 zibe nefuthe elibonakalayo kuninzi lwabathengisi bethu, kwaye ke zisizisele nengeniso. Ngoku, kunanini na ngaphambili, sixhomekeke kubhaliso lwakho lwedijithali ukuxhasa iindaba zethu.
Ukubhalisela i-scotsman.com kunye nokufikelela okungenamkhawulo kwiindaba zaseScotland kunye nolwazi kwi-intanethi nakwi-app yethu, nceda undwendwele i-https: //www.scotsman.com/subscriptions